Network Engineer - Hurbad
Network Engineer qofka ah wuxuu maamulaa Network-ga shirkada guud ahaan, shaqooyinka ow qabto waxaa ka mid ah; dhisitaanka network cusub, casriyaynta qalabka network-ga sida routers iyo switches, xalinta iyo ka hortaga ciladaha network-ga sida kuwa wired ah ama kuwa wirelless-ka ah. booqashada dhimayaasha shirkada iyo hubinta isku xirnaashaha network-ga shirkada, Qorshaynta miisaaniyada dhaqaale ee ku baxaysa qalabka lagu soo kordhinayo Data Centre-ka shirkada, naqshadaynta network-ga iyo fulinta mashruucyada cusub.
Mushaarka lagu shaqeeyo bishii USA/UK: $5,100*
Mushaarka lagu shaqeeyo bishii Somalia: $650*
Koorsooyinka lagu noqdo Network Engineer
Network Engineer-ka waxaa kaloo looga baahanyhay inuu leeyahay, xirfadaha shaqsiyeed sida, wadashaqaynta xubnaha waaxda, qaadista masuuliyadaha soobaxa, cod karnimo, daganaasho iyo dabci wanaag.
Cisco Certified Network Associate - 200-301
Koorsadaan waa CCNA cusub Exam number keeduna waa ( CCNA 200-301 )
$20 / Lifetime Access
Koorsadaan waxaa lagu baranayaa
Core exam ka CCNP da cusub ENCOR.
$30 / Lifetime Access